မီးပြတိုက်: ကြိုဆိုပါတယ် အန်တီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ယခုချိန်မှာ အဖက်ဖက်က တိုးတက်နေတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက အသိမှတ်ပြုပြီးရင်း အသိမှတ်ပြုနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူထဲက ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးအတွက် ဒို့တာဝန်အရေး (၃)ပါး၊ မူဝါဒလမ်းစဉ် (၇) ရပ်၊ ဦးတည်ချက် (၁၂) ရပ် တို့ကို အကောင်ထည်ဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူအားလုံးနှင့်အတူ လက်တွဲပြီး တက်နိုင်သမျှ၊ တက်စွမ်းသမျှ ဆောင်ရွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါ၏။
Anonymous says 15 November 2010 at 15:57
"ယခုချိန်မှာ အဖက်ဖက်က တိုးတက်နေတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက အသိမှတ်ပြုပြီးရင်း အသိမှတ်ပြုနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။"
ဘယ်နေရာမှာ တိုးတက်နေတာ ရှိလဲ။ ဆုတ်ယုတ်နေတာပဲ တွေ့တယ်။
"ပြည်သူထဲက ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်-----------------------------ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူအားလုံးနှင့်အတူ လက်တွဲပြီး တက်နိုင်သမျှ၊ တက်စွမ်းသမျှ ဆောင်ရွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါ၏။"
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူထဲက ပြည်သူတယောက် မဟုတ်ဘူး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဆိုတာ လက်မခံချင်နေ အများလက်ခံထားတာကို နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။
Anonymous says 15 November 2010 at 17:27
ကိုမီးပြတိုက်ခင်ဗျာ အပြုသဘောဆောင်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံကို အကောင်းမြင်ရေးသွားတာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ကိုမီးပြတိုက် ပြောသလိုပဲ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ တိုးတက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူ အားလုံး ကိုယ်စီ တာဝန်ကျေဖို့ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ကြရမှာပါ။
Anonymous says 16 November 2010 at 00:07
why not post the comments and articles/blogs in this website in english? the important thing is not to let know the people who could read burmese but also highlight to all those opposite media attacks on the www... and also the article about the vote/election related comments(positive) by foreign papers... it would be better if the details (date, time and heading of ) the article is referred .. just like to make it more complete and in standard form.. (could also be more helpful for those who like to share the article in other networks)..
Anonymous says 16 November 2010 at 05:38
ခုလို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကိုမီးပြတိုက်သဘောထားကို လေးစားပါတယ်
maung says 16 November 2010 at 18:54
တင်ခြင်လို့တင်တာမဟုတ်ဘူး သူ့လူကိုယ့်ဘက်သားယောက်ပြား စစ်ဗိုလ်လိုလုပ်တာ အကောင်းသိပ်မြင်နေရင် မင်းအမ ငါနဲ့ရပြီး ဗိုက်ကြီးလို့ထားခဲ့ရင်လဲ အကောင်းမြင်ပေးနော် ယောက်ဖ
နိုင်ကို says 16 November 2010 at 22:48
အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်လို့ပဲ ခံယူခံယူ လူထုခေါင်းဆောင်လို့ဆိုဆို မည်သို့သော ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့သူမဆို အားလုံးဟာ ပြည်သူထဲက ပြည်သူတွေမဟုတ်ပါလား...
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမှု ကျုပ်တို့နိုင်ငံတွက် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမယ် တိုးတတ်ဖွံ့ဖြိုးမယ် ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဆိုတာကို လက်မထောင်နိုင်မယ် အရှေ့တောင် အာရှမှာ ထွန်းတောက်လာတဲ့ ခေါင်းမော့ ရင်ကော့နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ပြန်လည် ဆန်းသစ်လာမယ်ဆိုရင် အားလုံး အားလုံး အတူတကွ ချီတတ်လက်တွဲကြရမည် မဟုတ်ပါလား...
Hnin says 18 November 2010 at 17:52
သူများခင်းပြီးသားလမ်းကို အဟုတ်ထင် သူများပေးတဲ့အမိန့်ကို ပညတ်ထင်ပြီးဘုရားလိုကိုးကွယ်နေတဲ့ သူများပါးစပ်မှာလမ်းဆုံးနေတဲ့သူတွေထဲမှာ ငါတို့အမေမပါဘူး။ တိုးတက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ပျက်စီးနှုန်းတိုးတက်တာကိုပြောတာလား။ နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတွေကို လက်ညှိုးထိုးရောင်းစားတဲ့နှုန်းတိုးတက်တာကိုပြောတလား။ လာဘ်စားအကျင့်ပျက်နှုန်းတိုးတက်တာကိုပြောတာလား။ logical thinking ဆိုတာကိုနားလည်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိမှာပါ။ အမေပြောသလိုပဲ ကျေးဇူးတင်စရာတွေသာတကယ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အသေအချာကျေးဇူးတင်ပစ်လိုက်မယ်။
nay says 20 November 2010 at 10:16
xxx says 17 December 2010 at 23:42
ငါလည်း အားကျမခံ သူ့အဖေ ဖြစ်ချင်စမ်းပါဘိနှယ်ကွယ် ..
Maung says2August 2011 at 10:29
မြန်မာနိုင်ငံကို စော်ကားသော မောင်သည် အတု အယောင် ဖြစ်ပါသည်။ မောင် အစစ်သည် အမိ အဖ မျိုးရိုး အစဉ်အလာ ကြီးမားသော မောင်ဖြစ်ပါသည်။
ပိတောက်မြေ မှာလည်း အဲဒီမောင် အတု က ၀င်ရောက် နှောက်ယှက်တတ်ပါသည်။